10 Talooyin Sida Loogu Safro Shiinaha Tareen | Save A tareenka
Home > Tilmaamaha Tareenka Safarka > 10 Talooyin Sida Loogu Safro Shiinaha Tareen
Dhaqan iyo casri ah, deggan oo mashquul badan, Shiinaha waa mid ka mid ah dalalka ugu xiisaha badan ee wax laga baadho, gaar ahaan tareenka. Qorsheynta safarka Shiinaha waxay noqon kartaa mid xad dhaaf ah, sidaas ayaan ku urursannay 10 talooyin ku saabsan sida loogu safro Shiinaha tareen.
Laga soo bilaabo xirxirashada si aad u goosato tikidhada tareenka, kuwan 10 talooyin si aad ugu safarto Shiinaha tareen, kala saari doonaa wixii jahwareer ah, iyo in la hubiyo xiisaha ugu xiisaha badan.
1. Talo Siinta Sida Loogu Safro Shiinaha Tareen: Samee Cilmi-baaristaada
Shiinaha, waxaad ka heli doontaa inay jiraan 2 noocyada tareenada: Xawaare sare iyo tareeno dhaqameed. Waa muhiim inaad horay u sameysid baaritaankaaga, si aad u fahanto waxa adiga kuugu fiican miisaaniyadda safarka, nooca safarka, duration, iyo heerka raaxada. Gaar ahaan waa muhiim haddii aad tahay la safrida caruurta.
Tareenada Shiinaha - Tareenada xawaaraha sare ku socda ee lambar G, D, ama C, xawaaraha sare ee 350 km / h. ku qalabaysan ganacsi / VIP ama kuraasta heerka koowaad.
Tareenada dhaqanka ee cinwaan looga dhigay L, K kuwa caanka ah, oo ay bixiyaan kuraas adag, hurdo adag ama jilicsan, iyo hurdo jilicsan oo jilicsan. Ku safraya 160 km h way ka jaban yihiin.
2. Talo Siinta Sida Loogu Safro Shiinaha Tareen: Buug fasalka saxda ah ee tareenka
Tareenada Shiinaha waxay leeyihiin afar fasal: Kursi adag, kursi jilicsan, hurdo adag, hurdo jilicsan.
Kursi adag: Waa fasalka tareenka ugu raqiisan, waxaana jira badanaa 5 kuraasta safkiiba. Sidaas, haddii aad ku safreyso miisaaniyad, tani waa xulashada ugu caansan, laakiin tixgeli inay sidoo kale tahay ikhtiyaarka ugu badan ee Shiinaha. Sidaa darteed, waxaa laga yaabaa inaad ku jirto buuq badan oo dad badan safarka tareenka.
Hurdo jilicsan: waa ka yara jilicsan yahay oo leh tigidh tareen oo sareeya, laakiin ka raaxo badan.
Hurdo adag: 6 dekedda, mana jiro albaab asturnaanta ama ka go'naanta qaybaha kale.
Hurdo jilicsan: fasalka ugu fiican ee tareenada ee tareenada Shiinaha, aadna loogu talinayaa safarada tareenka masaafada dheer. Waa xulashada ugu qaalisan, laakiin waxaad ku jiri doontaa qol cidlo ah, of 4 hurdaa, iyo saldhigyo awood shaqsiyeed. Hadaad tihiin lamaane safar ah, markaa deluxe-ka ayaa kugu habboonaan doona.
3. Imaatinka Xarunta Tareenka Si Horay Loogu Socda
Saldhigyada tareenka ee ugu mashquulka badan dalka Shiinaha ayaa ah kuwa ugu waaweyn, fowdo, waxaana ku jiri doona nidaam raajo shandado ah. Sidaa darteed, waa inaad timaaddaa ugu yaraan 40 daqiiqado ka hor waqtigaaga tareenka. Sidan, waxaad heli doontaa waqti kugu filan oo aad ku maamusho baasaboorka, hubinta amniga, oo raadi barxadda tareenka.
4. Xirmo Cunto fudud iyo Cabitaano
Cuntada iyo cabbitaannada saaran ayaa aad uga qaalisan, ka badan marka aad wax ka iibsaneyso magaalada. Sidaas, waxaad si fiican u sii diyaarin lahayd, horayna u soo iibsadaan cunto iyo cabitaan, iyo inaadan ka iibsan cunnooyinka fudud ee raashinka tareenka saaran. Miro cusub, ismaris, iyo xitaa KFC waa cunto fudud oo weyn safarkaaga tareenka ee Shiinaha tareenada-xawaaraha sare.
5. Talo Siinta Sida Loogu Safro Shiinaha Tareen: Si fiican u Baakad Bacdaada Musqusha
Xarumaha tareenada xawaaraha sare leh iyo rasaasta ee Shiinaha waa kuwo casri ah. Waxay u badan tahay inaad tareen kasta ka heli doonto labada musqulood oo fadhiidka ah iyo kuwa casriga ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaad ka fiicnaan laheyd inaad waraaqdaada musqusha aad xirto, maaddaama tani ay u eg tahay inay si dhakhso leh ugu dhammaato tareennadaas dheereeya. Intaa waxaa dheer, tareenada oo dhami ma laha qolal qubeys, markaa xir xirmo qoyan hadday dhacdo, inay ahaato mid cusub, iyo dabcan dhalada shaambo iyo saabuun safarka.
6. Xidho Lakabyada
Xirashada lakabyadu had iyo jeer waa fikrad aad u fiican safarka tareenka, maadaama aadan dhexdhexaad ka noqon karin AC tareennada. Sidoo kale, hadaad qolkaaga la wadaagayso, ma noqon doontid meel beddel loo qoondeeyey, iyo xirashada lakabyada waxay ka dhigan tahay inaad diyaar u tahay wakhtiga firaaqada, seexo tareenada seexda, iyo rakaab kasta, lab ama dhadig, kula wadaago qolka tareenka.
Xirashada lakabyada tareenka ee ku safraya caarada Shiinaha ayaa noo horseedaysa caarad kale oo muhiim ah oo nalalka xirxiraya. Kaalmada shandadaha tareenada Shiinaha ayaa ku eg 20 Kg halkii rakaab. Inkasta oo ay jiraan marar dhif ah oo ku saabsan hubinta guddiga, boorsooyinka boorsooyinka tareenada ee Shiinaha waa xad xadidan, markaa waxaad ka fiicnaan laheyd inaad iftiinka xirto, Shandadahaagana haku agdhawaadaan, ama haddii boosku saamaxo, qolka tareenka, halkii kaydinta jidadka tareenka.
Haddii aad safreyso inta lagu guda jiro Ciidaha Shiinaha, kadib loo diyaar garoobo tareenada dadka ku badan. Sidaa darteed, waxaad ubaahantahay boorsadaada oo dhow oo muuqata shandadaha oo dhan.
8. Tigidhada Tareenka ku iibso khadka tooska ah
Waxaad ka iibsan kartaa tikidhka tareenka xarunta tareenka, wakaaladaha socdaalka, iyo hoteelkaaga.
Waxaad heli doontaa sicirka ugu fiican markaad iibsaneyso tikidka tareenka ee Shiinaha, online. Save A tareenka ayaa ku farxi lahaa inuu kaa caawiyo inaad hesho tikidhka ugu fiican ee safarkaaga tareenka ee Shiinaha oo dhan, qiimaha ugu fiican. Waxaa intaa dheer, waxaad u sahlanaan doontaa inaad tikidhka tareenkaaga ku sii gogol dhigto barxadda ku hadasha Ingiriisiga, marka loo eego wakiilada Shiinaha ee jooga xarunta tareenka, hotel, ama wakaaladda socdaalka.
9. Soo qaado Dhagaha
Ilaa aad qorsheyneyso inaad safarto fasalka 1aad, waa inaad xaqiiqdii soo qaadataa dhegaha dhegaha. Tareenada xawaaraha sare ku socda ee Shiinaha ayaa caan ka ah dadka deegaanka, iyo tareenada dhaqameed waxay noqon karaan kuwo aad mashquul u ah. Sidaas, haddii aad safar dheer ku joogto guud ahaan Shiinaha, xir xirmooyin dhegaha si aad ugu hesho safar badbaado iyo dhawaq leh.
10. Talo Sida Loogu Safro Shiinaha Tareen: Sii Tigidho Tigidhada Tareenkaaga Kahor
Tikidhada tareenka dheereeya ee Shiinaha waxay u muuqdaan inay si dhakhso leh u dhammaadaan. Sidaa darteed, waa inaad iibsataa tigidhka tareenkaaga ugu yaraan bil kahor. Tigidhada ayaa la iibiyaa goor hore 30 maalmood ka hor taariikhda bixitaanka. Ka bixitaanka tigidhada tikidhada iyo qorshaynta safarka ee daqiiqada ugu dambaysa waa qalad safar si looga fogaado, gaar ahaan Shiinaha.
Safarka tareenka waa hab fiican si ay u bilaabaan aad deegaanka-saaxiibtinimo safar guud ahaan baadiyaha Shiinaha, magaalooyinka, iyo aragtiyo. halkan at Save A tareenka, waxaan ku farxi doonaa inaan kaa caawinno inaad qorsheyso fasaxaaga Shiinaha tareen ahaan.
Ma rabtaa inaad ku dhajiso bartayada "10 Talooyin Sida Loogu Safro Shiinaha Tareen" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-travel-china-train%2F%3Flang%3Dso የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Chinabytrain	Chinatrains	Chinatraintickets	Chinatrip	Xirmooyinka 'Chinetraveltips'	travelchina